कला साहित्य – Page3– JanaSanchar.com
कण्डम फुटेको रात !
चिन्ता नगर कालीकी आमा जे होला होला हुर्किनदिउँ तिम्रो पेटको बच्चालाई ! अब फेरि एवार्सन गर्ने कुरा नगर अब फेरि डिष्ट्रोयट गर्ने कुरा नगर जन्मिनदिउँ तिम्रो पेटको बच्चालाई !! किन सम्झिएर अशान्त पार्नु आफ्नै मनलाई किन चुक्चुकाई बस्नु भन त , सम्झि सम्झि त्यो कण्डम फुटेको रातलाई !!! संगिनी सुई घोँच्दा घोँच्दा शिथिल बनेको थियो तिम्रो..
ए पुस ! तँ किन घमण्ड गर्छस तँ भन्दा नि चिसो यो देसका शासकहरु छ्न तैले त भलै मधेसमा दुइचार दर्जन ढलाइस होला र हिमालमा पनि यहाँ त दलाल ब्यबस्थाको चिसोले हजारौं हजार ढलिसके र हजारौं हजार गलिसके तँ किन फुर्ती लाउछ्स ए पुस ? तँ घाम सँगै हराउछ्स र आगो सँग डराउछ्स नि है तर तिनिहरु त न डराउछ्न न हराउछ्न, अझै चर्को चर्को स्वरले कराउँछ्न र..
नेवा खल कास्कीको आयोजनामा यस वर्ष हुने सिजी मिस नेवा पोखरा ११३८ को तयारी तीव्र पारिएको छ । आयोजकले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी विभिन्न २२ उपसमितिसमेत गठन गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिएको हो । नेपालमा नेवार समुदायले समृद्धि, भाषा, कला, साहित्य, संस्कार, अर्थ सबै क्षेत्रमा निर्वाह गरेको भूमिकाबारे नयाँ पुस्तालाई जानकारी दिन प्रतियोगिता सफल..
अथाह सपनाको हवाई जहाज चढेर बुलबुल १४ वर्ष अघि हड्डी खियाउने शहर युएई पस्यो । आज १४ बर्षे सपनाको एउटा भ्रुण बोकेर स्वदेश झरेको छ । भन्नुको मतलब हड्डी खियाउने शहर पसेको मैकोटको भेडीगोठे ठिटो पृथीछक बुढा मगरले कलम घोट्न पनि सिकेछ । आफ्नो हड्डी संग संगै कलमको निम खियाउदा एक प्रगतिशील लेखक पो बनेछ । पूर्वी रुकुम मैकोटका भेडीगोठे मगर सँग अचेल..
सिर्जना बस्नेत त्यो दिन अर्थात् मैले एक्काइस वर्ष पहिलाको रहस्य खुलाएको दिन । मेरो स्मृतिमा ताजै छ २०७२ असारको पहिलो त्यो हप्ता । बिस्तारै धर्ती भाँसिए जस्तो महसुस भएको थियो । अरुको लागि दिन सधै जस्तो सामान्य नै थियो । तर मेरो लागि फरक । दश बज्न दश मिनेट नै बाँकी थियो । म कोठाको ढोकामा चाबी लगाउँदै थिएँ । मोवाइलको घण्टी बज्यो । ब्यागबाट..
यात्रा रोक्नु हुँदैन है !
थुप्रै कष्ट किलै सरी पयरमा यात्रा भरी आउला साह्रै दु:ख हरेक मोडहरुमा बाटो भरी छाउला । थाक्ने हुन्छ कहीँ कतै सफरमा धेरै हिँडेमा पनि यात्रा रोक्नु हुँदैन है ! बगरमा घाँटी सुकेमा पनि ।। इच्छाशक्ति भए हरेक पलमा यात्रा हुने गर्दछ गर्ने जोश भयो भने जगतमा माैका घुमी फिर्दछ यात्रा आैसर हो लिनू सहजता जस्तै भएमा पनि यात्रा रोक्नु हुँदैन है ! समरमा..
दुई महिनादेखि मैले केही लेख्न सकेकी छैन। डायरीका यी रित्ता पृष्ठहरू जति पल्टाउँछु उत्ति मनभित्रको खाली झन् झन् बढ्दै गएजस्तो लाग्छ।कस्तो खाली हो म आफैं पनि जान्दिन। म दुब्लाइसकें, थूकसित कहिलेकाहीं रगत मिसिएर आउँछ, रातो आँखै तिरमिराउने कालो रगत। मलाई टी.बी. भएको रहेछ। हुन त कहिलेदेखि भएको हो, तर थाहा भएको भने आठ महिना भइसक्यो, तबदेखि यही..